ကူညီကြပါအုံးဗျာ............ — MYSTERY ZILLION
July 2008 edited July 2008 in Help Desk
ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာ C အောက်က Program File ကိုဖွင့်လို့မရလို့..
ဖွင့်ရင် win cool v4 error ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်..
kaspersky Antivirus 7.0.125 ကိုသုံးထားပါတယ်..
ဗိုင်းရပ်စ်လား Window Error လား....
အဲလေ ပြောကြည့်ပေးမယ်။ အတိုဂျီးတွေမလာသေးခင်ပေါ့။
အခု ကိုအင်လေသာ ဖြစ်နေတာက window update လုပ်မိလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဒါမှမဟုတ် တခြား software တစ်ခုခုကို update လုပ်မိလို့ပါ။
ဒါပေမယ့် update လုပ်ရုံနဲ့တော့ ဒီ error ပေါ်တာမဟုတ်ပါဘူး။
လုပ်တဲ့ update က incomplete မဖြစ်ခင် connection ပြုတ်သွားလို့ဖြစ်ဖြစ်၊ မီးပျက်သွားလို့ဖြစ်ဖြစ်
Myanmar developing error ဖြစ်သွားလို့ပါ။ ဖြေရှင်းနည်းကတော့
ကို အင်လေသာရဲ့ window version ပေါ်မူတည်ပါတယ်။
သူ့ကတော့ window 2000 နဲ့ window 98 လို့ပဲပြောတယ်ဂျ။
Xp ကိုတော့မပြောထားဘူး။ အဲ့ဒါ အနော်သိသလောက်ပြောတာ။
Read it bro !
I want to give you some advise !
When you deal with some problem,you should search it in google search first.
This is the best way to improve your skills.Don't mind me .
ရေနစ်နေတာလား....:P...(စတာနော်)..........အစ်ကို့ ပြဿနာက ကို bhope
ပြောသလိုဖြစ်နိူင်ပါတယ်........(ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှာနော်....:D) ။ အဲဒါဆိုရင် http://www.softwaretipsandtricks.com/forum/windows-xp/5527-windows-update-v4-error-admin-required.htmlကိုသွားကြည့်လိုက်ပါ။ တစ်ခုခုတော့ထူးခြားပါ
လိမ့်မယ်...အစ်ကိုဖြစ်နေတာနဲ ကိုက်ရင်အဖြေချက်ခြင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်....ဒါမှ မဟုတ်ရင် ဖြေရှင်းနိူင်တဲ့
V4 error ဆိုတာကိုတော့ အဲဒီလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ နားလည်ပါတယ်။
win cool V4 error ဆိုတာကိုတော့ တစ်ခါမှ မကြားဖူးဘူး။
Id10T error များလား....:D
ဖြစ်ကတည်းက Google မှာရှာတာ မရဘူး.. :2:
နောက်ဆုံးတော့ System Restore လုပ်ပဲလုပ်လိုက်တယ်.....